Jordania - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Jordania
Ahoana ny fomba hahazoana asa any jordan?
Jona 28, 2021 Shubham Sharma asa, Jordania
I Jordania dia firenena Afovoany Atsinanana any Moyen Orient. Ny Arabo no fiteny ofisialy. Raha efa manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, na Jordaniana ianao, dia azonao atao ny midina mijery ny fomba hahitana asa any Jordania.
Fifandraisan'ny Fanjakan'i Jordania, tranonkala fampahalalana ary vondrona vondrona chat
Febroary 6, 2020 Demi Jordania, rohy mahasoa
Sata arabo momba ny zon'olombelona (Anglisy) Zo amin'ny programa sesitany any Jordania (All Languages ​​in Google Translate) Lisitry ny fikambanana miasa amin'ny lalàna mifindra monina any amin'ny firenena samihafa. Ny ankamaroan'ireo fikambanana ireo dia miasa maimaimpoana ho an'ireo mpitsoa-ponenana ary